Mhuri yaVaTsvangirai, VaChamisa naVaMwonzora Vobatana neNyika Mukurangarira Mushakabvu Morgan Tsvangirai
Vanhu vakawanda munyika vabatana mukurangarira vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai avo vakavawo mutungamiri wekutanga webato guru rinopikisa reMDC.
VaTsvangirai vakashaya musi wa14 kukadzi kuSouth Africa nechirwere chegomarara uye vange vave nemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa.
Vachitaura vakamirira mhuri yekwaTsvangirai, munin’ina wemushakabvua VaManase Tsvangirai vati nyika yakarasikirwa nemunhu aive nemuono wemberi.
Mapato anopikisa anoti reMDC Alliance neMDCT aitawo mhemberero dzakasiyana siyana mukurangarira VaTsvangirai.
MDC Alliance inotungamirwa naVaNelson Chamisa yaita zvirongwa zvakasiyana siyana panhepfenyuro yayo yepadandemutande ichirangarira VaTsvangirai segamba rakarwira hutongo hwejekerere.
Vachinyora padandemudande ravo reTwitter, VaChamisa vati pana VaTsvangirai vakarasikirwa nemunhu anga ari nyanzvi munyaya dzerunyararo uye aive nechido chekusunungura vana veZimbabwe mukutambura. VaChamisa vaudzawo Studio 7 kuti VaTsvangirai igamba munyaya dzekurwira hutongo hwejekerere.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti chirwere cheCovid-19 chatadzisa bato ravo kuti riite mhemberero dzekuunganidza vanhu asi vakati vanorangarira hupenyu nehutungamiriri hwaVaTsvangirai.
MDC-T inotungamirwa naVaDouglas Mwonzora yaitawo mhemberero dzekurangarira VaTsvangirai kumuzinda webato iri weMorgan Richard Tsvangirai House muHarare paine vanhu vashoma nenyaya yekutyira kupararira kweCovid-19.
Asi hurongwa uhu Hwange huchibuda pamadandemutande. Vamwe vakokwa vanosanganisira mutungamiri weNCA Muzvinafundo Lovemore Madhuku uye mutungamiri weLEAD Muzvare Linda Masarira.
Vachitaura pahurongwa hwekurangarira VaTsvangirai uhu, mutungamiriri weMDC-T VaMwonzora vatiwo bato ravo riri kutevedzera matsimba aVaTsvangirai ekubatanidza vana veZimbabwe .
Sachigaro webato iri VaMorgan Komichi vati VaTsvangirai vanga vasina humbimbindoga .
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano rePlatform for Youth Development VaClaris Madhuku vakurudzirawo mapato akasiyana siyana eMDC kuti abatane vachiti iyi ndiyo yaive shuviro yaVaTsvangirai.
Zvinyorwa zvizhinji zvaiswa pamadandemutande nhasi zvanga zvichirumbidza VaTsvangirai semutungamiriri aive nerudo pamwe nechido chekuti vana veZimbabwe vasununguke.